» बिग मर्जरमा जान लागेको हिमालयन बैंकको नाफामा भारी गिरावट, वितरणयोग्य नाफा २ करोडले *वृद्धि
बिग मर्जरमा जान लागेको हिमालयन बैंकको नाफामा भारी गिरावट, वितरणयोग्य नाफा २ करोडले *वृद्धि
२०७८ बैशाख १४, मंगलवार ०८:१६
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा हिमालयन बैंकको नाफा ४४ प्रतिशतले घटेको छ । गत आवको ९ महिनामा २ अर्ब ३१ करोड नाफा गरेको बैंकले चालु आवमा १ अर्ब २८ करोड ७१ लाख रूपैयाँमात्र खुद नाफा निकालेको हो ।
अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार बैंकको वितरणयोग्य नाफा ८४ करोड ७६ लाखमा पुगेको छ । वितरणयोग्य मुनाफा गत आवको यही अवधिभन्दा २ करोड बढी हो । यस अवधिमा बैंकको खुद ब्याज आम्दानीसँगै सञ्चालन मुनाफा घटेका कारण खुद मुनाफा घटेको वित्तीय विवरणले देखाउँछ ।
बैंकको खुद ब्याज आम्दानी २९.४५ प्रतिशतले घटेर २ अर्ब ७१ करोडमा सिमित भएको छ । खुद फि तथा कमिसन आम्दानी ४.७४ प्रतिशतले घटेर ४९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। बैंकको सञ्चालन मुनाफा १ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत आव बैंकको सञ्चालन मुनाफा ३ अर्ब ८ करोड थियो ।
बैंकले हालसम्म १ खर्ब ३२ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ निक्षेप परिचालन गरी १ खर्ब २१ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । बैंकको निष्क्रिय कर्जा सामान्य आधाले घटेर ०.८१ प्रतिशतमा सिमित भएको छ ।
निक्षेप : 132240977
कर्जा : 121565802
खुद मुनाफा : 1287157
वितरणयोग्य मुनाफा : 847666
खुद ब्याज आम्दानी : 2710971
सञ्चालन मुनाफा : 1880171
प्रतिसेयर आम्दानी : Rs. 16.06
नेटवर्थ : Rs. 171.81
कोषको लागत : Rs. 4.6
खराब कर्जा : 0.81 %
आधार ब्याजदर : 6.75 %
स्प्रेड दर : 3.35 %
* सच्याइएको । यसअघि अन्यथा भएकाले सच्याइएको छ ।